Honda CR-V 2019 (#724468) ကို Dagon ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင္းရန္ရွိ | CarsDB
1954 total views, 78 today
Lot Number: #724468
အခုချိန်မှာ CRV 2017 ကိုသိန်း ၈၀၀ ကျော်ပေးပြီး သူများသုံးထားတဲ့used ကားကိုဝယ် မလား ?
2019 Brand new ရုပ်ပြောင်း side camera ပါတဲ့CRV ကိုသိန်း ၈၀၀ ကျော်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကော ....
Honda CRV 2019 brand new for sale!
CRV pearl white color TOURING GRADE,
1.5 turbo , full option grade,
Touch pad TV include back camera, side camera ,apple car play , android Auto,
Power back door ,
Lane keep assist ,
Power seat ,
Car is in Yangon
Mdy or Bgo license available
Price = 810 (၈၁၀သိန်း)
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Forward super မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Honda CR-V 2019 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
Top Spot သက်တမ်းကုန်ရန်6ရက်